Thought after “ချဉ်ပေါင်ဟင်း & ဗမာ့အော်ရီဂျင်နယ်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Thought after “ချဉ်ပေါင်ဟင်း & ဗမာ့အော်ရီဂျင်နယ်”
Thought after “ချဉ်ပေါင်ဟင်း & ဗမာ့အော်ရီဂျင်နယ်”
Posted by Foreign Resident on Sep 19, 2011 in Creative Writing | 11 comments
in “ချဉ်ပေါင်ဟင်းက.. ဗမာ့အော်ရီဂျင်နယ်မဟုတ်ဖူး “ post
I found outalot of people blame our “သူကြီး” for not having sufficient patriotism.
“သူကြီးရဲ့လေသံနားထောင်ရတာ မြန်မာလူမျိုး၊ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို တော်တော် နာကျည်းနေပုံရတယ်။
“သဂျီးက မြန်မာဆိုရင် ချစ်မလိုလိုနဲ့ အရိုးအသားထဲက လိမ့်မုန်းနေတာ..”
“သူကြီးရေးတာတွေကို ဖတ်ကြည့်တော့လဲမြန်မာ(ဗမာ) ဖြစ်ရတာကိုရှက်တာလား။ အားငယ်နေတာလား။
As for me, I understand “သူကြီး” & I think,
So far, I am with သူကြီး ( I am in သူကြီး Side ).
Dear fellow Myanmar,
First, I really appreciate that you want to be proud for Myanmar & trust me, I also do.
But, if you want to proud for Myanmar,
– You ( yourself ) must do something really proud for Myanmar or
– You must show some really proud works which were done by Myanmar.
– “Lord Buddha” is from India/Nepal.
– Chinese invented “paper”.
Otherwise, you cannot proud for beingaMyanmar
( especially in Foreign/abroad ).
Please don’t trust the propagandas from our Government alone.
( propaganda = faulty information with biased & misleading nature, used to promote political causes )
Please, come to real & sensible world.
There is “nothing” ( I repeat, nothing ) from Myanmar in UNESCO approved World Culture & Natural Heritage list.
Even, our neighbor “Thailand” has five.
– Ban Chiang Archaeological Site
– Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex
Other neighbor, “Bangladesh” has three.
– Historic Mosque City of Bagerhat
– Ruins of the Buddhist Vihara at Paharpur
Even, other tiny neighbor “Lao” has two.
“Lao People’s Democratic Republic”
– Town of Luang Prabang
– Vat Phou and Associated Ancient Settlements within the Champasak Cultural Landscape
I don’t need to say about other greater neighbors “China” & “India”
When I visited to China recently,
I feel very sad to know,
justatiny/little garden, owned by single people, in China,
is reserved & treated as World culture heritage site &
our country ( Burma ) has none.
(Generally, most of the people around the world judge the culture of the country by this list)
This is Classical Gardens of Suzhou ( Suzhou, China )
about 5400 Square Meter ( 58125 Square feet / 1.33 acre / less than 250 feet x 250 feet ) wide garden
is approved by UNESCO & it is in the World Culture Heritage list.
http://whc.unesco.org/en/list/813 ( Classical Gardens of Suzhou )
Formerly, our “Pagan” was in this UNESCO approved World Culture Heritage list.
But, after our Stupid Government
( even repeatedly forbade & warned by UNESCO )
– Repaired the “Pagan” without considering ancient culture value
( eg ; painting gold paint to “Kaung Mhu Daw” pagoda ) &
– Built new modern buildings in those ancient area
( eg ; built new tower & etc in “Pagan” )
Then, “Pagan” does not have enough culture & ancient value &
It was removed from UNESCO approved World Culture Heritage list.
Wake up, my fellow Myanmar, wake up & be realistic.
It seems we have nothing to proud about our culture so far ( at least, recently & officially ) &
Our culture image was destroyed by ourselves.
Really feel sad.
Brochure of Classical Garden of Suzhou with UNESCO World Culture Heritage Logo
It is situated in this narrow alley.
Chinese style map of The Master of the Nets Garden
The Pond & Zig Zag Bridge in the Garden
More than 100 years old Bonsai Plant ( Guide said )
They proudly posted UNESCO approved World Culture Heritage Logo even in Toilet
တကယ် တန်ဖိုး ရှိတဲ့ အတွေးတွေနဲ့အကြံပေး ဆွေးနွေးမှု ပါပဲ။
ကျွန်တော် နွားခြေရာခွက်ထဲက ထွက်လိုက်တာတော့ အတော်လေးကြာပါပြီ။
ကိုခိုင်နဲ့F.R ရဲ့အတွေးအခေါ် အယူ အဆတွေဟာ တခြားလူ အတွက် မသိပေမဲ့ ကျွန်တော့်
အတွက်တော့ ညစ်ထေးနေတဲ့ အရေခွံ အဟောင်းတွေကို ထင်တာထက်ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကွာကျ
ဦးဖောရိန်းကြီး ပျောက်နေတာ ထင်တော့ထင်သားပဲ၊ တရုတ်ပြည်ရောက်နေမယ်လို့။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အပန်ဖြေခရီးဖြစ်ခဲ့မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံများကို တင်ပေးထားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ပို့စ်ကိုဝေဖန်ရရင် ဦးဖောရိန်းပေးထားတဲ့ ဥပမာနှစ်ချက်မှာ –
၁။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ မြန်မာပြည်မှာ မပွင့်ခဲ့တာ မြန်မာပြည်သားတွေကို စိတ်ချလို့ပါ။ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ တပည့်ဆိုတာ ဆရာနား ကပ်ဖို့မလိုပါဘူး။
၂။ တရုတ်တွေ စက္ကူထွင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မှန်ပေမဲ့ အဲဒီအချိန်လောက်ထဲက မြန်မာတွေက ကွန်ပြူတာပေါ်မယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ ယမ်းမှုန့်လည်း တရုတ်ထွင်တယ်ဆိုပေမဲ့ မြန်မာများ ညူကလီယားဗုံးအစွမ်းကို ကြိုမြင်ထားလို့ ဂရုမပြုခဲ့တာပါ။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်မယ်ဆိုတာ သိထားတဲ့ နတ်ဗြဟ္မာများ လောကီအစွမ်းရှိတယ်ဆိုတိုင်း အထင်မကြီးကြ သလိုပါပဲ။
ယူနက်စကိုနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဦးဖောရိန်းရဲ့ ဩစတေးလျလို မချမ်းသာပေမဲ့ တရုတ်၊ ကုလား၊ ထိုင်း၊ လောနိုင်ငံတို့လောက် ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ကျခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရန် စက္ကူကျားစုတ် ယူအန်အဖွဲ့၏ ထောက်ပံ့ကြေး မလိုအပ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။
ရှေး တရုတ်တီထွင် မှုက လေး ခုတဲ့နော် ကိုကြောင် ။ :rolling:
1. Compass 2. Gun power 3. Papermaking and 4. Printing တဲ့ Wikipedia ကပြောတာ ။
UNESCO က အသိအမှတ်ပြုတော့ လည်း ပိုကောင်းတာပေါ့ ။ ဟုတ်ဖူးလား ??
FR ကစေတနာ နဲ့ပြောတာပါ ။ :D
မြန်မာဟာ ၁၉၄၉-နှစ်မှာ UNESCO အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၆-ခုနှစ် ကျမှယာယီစာရင်းရီပို့တ်တခုရှိခဲ့ပြီး ခုထိအဲဒီအတိုင်း ရှိနေခဲ့တာဟာမြန်မာ့မြေမှာရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေမရှိလို့မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ မှတ်တမ်းတင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှူတွေလုပ်နိုင်ခွင့်မရှိတာ /မပေးတာဒါမှမဟုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အကူအညီမပေးခဲ့တာအစရှိတဲ့ လူကြီးမင်းများ သိတော်မူကြတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့
ပေါ်လစီအရ “နည်းလမ်းမျိုး စုံအဟန့်အတားတွေ”နဲ့ အများကြီးပတ်သက်နိုင်တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ရမှာပါ။
((Properties submitted on the Tentative List
*Bagan Archaeological Area and Monuments (1996)
*Pyu Cities: Beikthano-Myo, Halin, Tharay-Khit-taya (Sri Ksetra) (1996)
*Wooden Monasteries of Konbaung Period: Ohn Don, Sala, Pakhangyi, Pakhannge, Legaing, Sagu, *Shwe-Kyaung (Mandalay) (1996)
*Badah-lin and associated caves (1996)
*Ancient cities of Upper Myanmar: Innwa, Amarapura, Sagaing, Mingun, Mandalay (1996)
*Myauk-U Archaeological Area and Monuments (1996)
*Inle Lake (1996)
*Mon cities: Bago, Hanthawaddy (1996)) အနေနဲ့ရှိပါတယ်။
Dear Thit Min,
I also saw “Properties submitted on the Tentative List”
But I cannot hide my sorrow
after seeing this tiny garden got recognition from UNESCO
as renowned & prestigious World Cultural Heritage site &
Our beloved mother land (Burma) has none (notasingle one).
I don’t care about the money ( would be come from UNESCO )
But, I care only on the prestige & honor of our Myanmar (culture).
there wasawar erupted between Thailand & Cambodia for Angkor Wat.
ကျွန်မလဲ အဲဒီပန်းခြံကို ရောက်ဖူးတယ် … အဲဒီတုန်းက ဓါတ်ပုံတွေအားလုံးမှာ လူကရှေ့ကနေခံနေလို့ ပို့စ်တင်ဖို့ အဆင်မပြေတာနဲ့ မတင်ဖြစ်ခဲ့ဘူး … ကိုဖောရိန်းရိုက်ခဲ့ပြီး ပုံတွေပြန်ပြတာ တော်တော်ကောင်းပါတယ် …
ကိုဖောရိန်းရဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘက်ပေါင်းစုံက စဉ်းစားကြည့်ရင် မြန်မာတွေ အားနည်းနေတာ ပိုသိသာတာပေါ့ … အများကြီး ကြိုးစားဖို့ လိုသေးတာပေါ့လေ …
Be proud with us .Human origin is from Myanmar . We , Myanmar start the plane hi-jack. (think about it , if we do not start , 9/11 will not be occur )
Now , recently interview with President , reported on face book and MG , we will change Irrawaddy River to Irrawaddy channel soon. How grade we are.
Be proud with Myanmar.
ဒီပို့စ်အတွက်… ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေး.. အရင်ပြောပါရစေ..။
(မှတ်တမ်းရုံး …….အမရပူရခေတ်ကပါဘဲ )
အဲဒီမှာလည်း..နှစ်ရာချီနေတဲ့.. ရှေးဟောင်းပစ္စည်း..အဆောက်အဦကို.. မြန်မာတွေ.. ထိမ်းသိမ်းထားတာ မတွေ့ရပြန်ဘူးလေ..။ အင်မတန် စိတ်မကောင်းစရာပဲ..။ အမှိုက်ပုံနဲ့.. ၂ပါးသွားနေလေရဲ့..။
အခုနေ.. မြန်မာပြည် အလည်သွားကြည့်လိုက်..
အသစ်အသစ်သော.. စေတီတွေ၊ ပုထိုးတွေ၊ ကမ္ဘာ့စံချိန်ဝင်ပါတယ်ဆိုပြီး သူ့ထက်ငါ..အပြိုင်အဆိုင်.. ဆောက်နေ..လုပ်နေတဲ့.. စေတီကြီးတွေ..။ မင်းမြောက်တန်ဆာတွေနဲ့.. ဆင်းတုကြီးတွေ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်..။
တချိန်ထဲမှာပဲ. မြန်မာပြည်အနှံ့ …ရှေးဟောင်းပစ္စည်း.. သမိုင်းအမွေဖြစ်တဲ့.. စေတီပုထိုးဟောင်းတွေ.. ဘု၇ားပျက်တွေ.. ပုထိုးပျက်တွေ.. တွေ့ရဦးမှာပါပဲ..။
ဘာသမိုင်းတန်ဖိုးမှမသိ.. ကမ္ဘာနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့. ခေတ်ပညာမတတ်သူ.. ဘိုးတော်၊ ရွာကျောင်းဘုန်းကြီး.. သီလရှင်..နတ်ကတော်.. တပါးပါးက.. အိပ်မက်အရတို့.. ဂမ္ဘီရတို့နဲ့.. ဤအရာသည်… အနော်ရထာမင်း..အလောင်းစည်သူမင်း.. တိုင်းခန်းလှည့်စဉ်.. ဘုရားဗျာဒိတ်ပေးလို့.. မြတ်စွာဘုရား.. မန္တလေးဗျာဒိတ်ပေးလာတုံးလမ်းမှာ ခရီးတထောက်နားရင်း.. ဘာဘာညာညာ..လုပ်ချလိုက်..။
“၀ုန်း”ဆို.. လူတွေ..ငွေတွေ…လှူကြတန်းကြနဲ့.. မူရင်းရှေးဟောင်းတန်ဖိုး..အားရပါးရ..၀ိုင်းဖျက်ပြီး.. ထုံးတွေသုတ်..။ ရွှေတွေချ.. ထီးတွေတင်.. လုပ်ကြပြန်ရောပဲ..။
အဲဒီပုတိုးစေတီ..ခန့်ခန့်ကြီးတွေကြား.. မြန်မာကလေးတွေက..နကိုကလည်း..ဗိုက်ပူ..နံကားအ၀တ်မပါ…. အမှိုက်ပုံတွေဖွလို့.. နေ့ည..ထမင်းနပ်မမှန်.. ..ခါးသီးတဲ့ဘ၀မှာ..။
ဒီကောမန့်က.. ကိုရင်ဘုန်းကျော်ပို့စ်ကိုလည်း.. ရည်ညွှန်းရေးပါတယ်..
ဆိုတော့.. ဆိုတော့… ထုံးစံအတိုင်း..ဆရာဇော်ဂျီကဗျာ.. ထပ်တင်ရမှာပဲ..။
ထုံးတွေသုတ် ရွှေတွေချထီးတွေတင် = မူရင်းရှေးဟောင်းတန်ဖိုးကိုအားရပါးရ၀ိုင်းဖျက်တာ
သူကြီးပြောတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ကိုခိုင်ရော၊ကိုFRကိုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ခုလို မြင်ခွင့်တွေ့ ခွင့်ရလို့ ပါ။
whatever ချဉ်ပေါင် is…
please let me ပြော…
ဗိုက်ဆာနေချိန် မှာ eatလို့ good ဖို့ ပါပဲ ..